Inona no atao hoe foton-javaboahary?
Ny "Photons of Energy" ny Photons
Ny fotony dia ampahany amin'ny hazavana voafaritra ho toy ny sombin-tsarimihetsika (na quantum ) an'ny angovo elektroagnetika (na hazavana). Ny photons dia mihetsika foana ary, amin'ny vakim-boka (toerana feno tanteraka), dia manana fahazavana maivana foana ho an'ny mpanara-maso rehetra. Ny fakam-panahy mandeha amin'ny hafanam-pandehan'ny hazavana (izay antsoina matetika hoe ny haavon'ny hazavana) amin'ny c = 2.998 x 10 8 m / s.
Araka ny fotorefine momba ny hazavana, photons:
dia mitovitovy amin'ny ampahany sy ny onja, amin'ny fotoana iray
Mandroso haingana amin'ny haavony , c = 2.9979 x 10 8 m / s (izany hoe "ny haingam-pandrefesana"), amin'ny toerana tsy misy
Manana herim-batana sy fahatokisana
dia mitondra hery sy hery, izay mifandray amin'ny hafanam-po ( nu) sy ny halavam- pahamehana (lamdba) amin'ny onja elektromagnetika, araka ny fitenin'ny E = h nu sy p = h / lambda .
dia azo fongotra / noforonina rehefa reraka / mitsangana ny taratra.
dia afaka manana fifandraisana amin'ny ampahany (toy ny fifandonana) amin'ny electrons sy ny singa hafa, toy ny ao amin'ny vokatra Compton izay mahatonga ireo hazavana mamirapiratra mifangaro amin'ny atôma, ka mahatonga ny famotsorana elektronika.
Tantaran 'ny Photons
Ny teny hoe photon dia novolavolain'i Gilbert Lewis tamin'ny taona 1926, na dia efa nandritra ny taonjato maro aza ny foto-kevitra momba ny hazavana amin'ny endriky ny disetika dia nofaritana tamin'ny fanorenana ny siansa ny optique.
Tamin'ny taona 1800 anefa, nanjary niharihary be ny toetran'ny hazavana (izay midika hoe taratra electromagnetique amin'ny ankapobeny), ary ny mpahay siansa dia nanipy ny fizotry ny hazavana tao amin'ny varavarankely.
Taorian'ny fanazavan'i Albert Einstein ny lanjan'ny foto-pahaizana dia nahatsikaritra fa ny hery mamirapiratra dia tsy maintsy nitombina fa niverina ny teoria.
Araka ny voalazan'ny voalaza teo aloha, ny hazavana dia manana toetra na onjam-pihetsika. Fahitana mahavariana izany ary azo antoka fa ivelan'ny faritra amin'ny fomba fijerintsika amin'ny fomba mahazatra.
Ny baolina baolina dia miasa toy ny singa, fa ny onja kosa mihetsika toy ny onja. Ny fakan-tsary dia mihetsika toy ny onja sy ny singa iray isaky ny fotoana (na dia mahazatra aza izy fa tsy araka ny tokony ho izy, milaza fa "indraindray ny onja ary indraindray ny ampahany" izay miankina amin'ny endriny izay miharihary kokoa amin'ny fotoana iray).
Ny iray amin'ireo vokatr'ity duality onenana ( ampaham-batana ampahany ) ity dia ny fotony, na dia marary toy ny singa kely aza, dia azo zaraina amin'ny fahita matetika, ny halavany, ny amplitude, ary ny toetra hafa mifandraika amin'ny onjam-peo.
Ny fotony dia singa fototra , na dia tsy misy volabe aza. Tsy afaka mamotika amin'ny tenany manokana izany, na dia mety halefa (na ho noforonina) ny angovo avy amin'ny photon amin'ny fifandraisana amin'ny singa hafa. Ny foton-tena dia tsy manavakavaka ary iray amin'ireo singa tsy fahita firy izay mitovy amin'ny antiparticle, ny antipotona.
Ny foton-drivotra dia ampahan-drivotra-1 (mampiroborobo azy ireo), miaraka amin'ny andrin-drakitra izay mifanaraka amin'ny lalana mankany amin'ny lalana (na mankany aloha na aoriana, miankina amin'ny "havia" na "havia tanana"). Ity endri-javatra ity dia mamela ny fanamorana ny fahazavana.
Inona no atao hoe Air Act Air?
Inona no fahaiza-manao mila mianatra ny fizika?
Mitady Shower Meteorin'ity Volana Ity?
Fahamarinana karbaona monoxide
Ny anarana, ny endri-javatra, ary ny toerana misy ny nerve crana
Jereo ireo safidy momba ny karazan'asa momba ny simia alohan'ny hahazoanao mari-pahaizana
Ahoana ny fiasan'ny tavoahangy?
Inona no Mahatonga ny Poizina?
Inona ny hafanana?
Mamadika Ny Nanometera amin'ny Angstrom
Inona no atao hoe metaphor?
Ny momba ny Tontalin'ny Periodika
Miasa amin'ny sary GIF ao Delphi
Entropy Change ohatra olana
Meet the Archangel Metatron, Angel of Life
FALSE: Nambaran'ny Praiminisitra Aostraliana fa tokony 'hifanaraka na hiala' ny silamo?
Robo na amerikano pasaporte: qué hay que hacer
Ny "minitra horaisiny" Movin 'On Up Game
Fampahalalana momba ny fifandraisana amin'ny olom-pirenena
Top 10 Rock Songs tamin'ny 1997
Ny tantara sy ny niandohan'ny fanjakan'i Kosy
Ady faharoa: Battle of Caen
Firenena mahatsiravina amin'ny fifidianana filoham-pirenena
Fanaovana fihomehezana - Ohabolana 17:22
Ny anjara asan'ny Zoos amin'ny fiarovana ny biby tandindomin-doza
'Black Swan' sy ny Duality ny Fiainan'ireo Vehivavy
Ny biby momba ny biby A hatramin'ny Z: amin'ny anarana siantifika
Raha afaka manonofy aho
Fanomezana fahafinaretana ho an'ny mpilalao baolina basketball
Ny tantaran'ny fisakafoanana
Ny anjara asan'ny GPA amin'ny adiresy fianarana ambony